राहत दिने र लिनेको फोटो होइन, विवरण सार्वजनिक होस् - निष्पक्षखबर
राहत दिने र लिनेको फोटो होइन, विवरण सार्वजनिक होस्
‘लकडाउन’ लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारका घरमा चुलो बल्न छाडेको छ । हातमुख जोर्न समस्यमा परे यस्ता परिवारलाई सरकारले राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यसै क्रममा अहिले निम्न आय भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन हरेक स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन् । सो कोषमा सहयोग गर्नेहरुको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । सहयोग गर्नेको संख्या बढिरहेको देख्दा विपत् कोषमा सहयोग रकम राम्रै संकलन हुने र त्यसले हातमुख जोर्न समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
तर, यो सहयोग विपत् कोषमा जम्मा गर्ने क्रममा देखिएको भीड, फोटो खिच्ने मोह अनि मास्क र पञ्जा नलगाएको देख्दा यस्ता कार्यले कोरोना संक्रमणको सम्भावना बढाइरहेको त छैन भन्ने देखिन्छ । विपत्को बेलामा सहयोग गर्नु राम्रो हो । तर सहयोग गरेको समयको फोटो खिच्नै पर्ने, दूरी कायम नगर्ने अनि मास्क र पञ्जा नलगाउने हो भने हामी कति सचेत छाँै भन्ने देखिँदैन र ?
हामीले राहत उपलब्ध गराएको सम्बन्धित परिवारले पाऊन् भनेर हो । यसमा अँगालो हालेजसरी फोटो खिच्नु अनि मास्कको प्रयोग नगर्नु र राहत उपलब्ध गराएको समयमा सबैको आँखा क्यामेरातिर हुनुले के संकेत गर्छ ? क्यामेरा नहुनु भने हामी राहत नै दिँदैनथ्यौँ कि ?
त्यसैले बेलैमा सोचौँ । राहत उपलब्ध गराएको फोटो खिच्नै पर्छ भन्ने छैन । हामीले फोटो खिच्दैमा सम्बन्धि परिवारले राहत पाउने होइन । राहत पाउने व्यक्तिको पनि फोटो नखिच्दा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्नुको सट्टा स्थानीय सरकारले दाताले उपलब्ध गराएको सहयोगको विवरण र विपत्मा परेका परिवारलाई दिएको राहतको विवरणचाहिँ पोष्ट गरेमा कति राम्रो हुने थियो ।
थप ३ जनामा भेटियो कोरोना संक्रमण
सुन्दरदुलारी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा १ हजार ५ सय केजी चामल विपत कोषमा जम्मा